ဝက်သားတွင် ရှိသော ဝက် တုပ်ပြားသံကောင် နှင့် အသက်အန္တရာယ် (Cysticercosis) - Myanmar Daily Time
[ July 17, 2019 ] ဝေဠုကျော်ကို အခုလည်း ချစ်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ သင်းသင်း	CELEBRITY
[ July 17, 2019 ] “ဘာမှ မရှိချိန်မှာတောင် လက်တွဲမဖြုတ်တာကို မေတ္တာစစ်လို့ခေါ်တယ်”	LIFESTYLE
HomeHEALTHYဝက်သားတွင် ရှိသော ဝက် တုပ်ပြားသံကောင် နှင့် အသက်အန္တရာယ် (Cysticercosis)
ဝက်သားတွင် ရှိသော ဝက် တုပ်ပြားသံကောင် နှင့် အသက်အန္တရာယ် (Cysticercosis)
July 10, 2019 admin HEALTHY 0
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးတစ်ဦးဟာဝက်တုပ်ပြားကောင် (tapeworm) ရဲ့ ဥကိုစားသုံးမိတာကြောင့် ယင်းသံကောင်ဥကဦးနှောက်ကိုကူးစက်ပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းအကျဉ်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တာဝန်ခံဆရာဝန်ရဲ့ ဖြေကြားချက်အရ“ဒီလူငယ်လေးရဲ့မိဘတွေဟာ ဆေးရုံရဲ့ အရေးပေါ်ဆေးကုသခန်း(emergency resuscitation centre)ထဲကို ရေးကြီးသုတ်ပြာနဲ့ ပြေးဝင်လာကြပါတယ်။
လူငယ်ကိုကြည့်လိုက်တော့တစ်ကိုယ်လုံးတက်နေတယ်( tonic clonic seizure၊ history ကိုမေးကြည့်တောလူငယ်လေးကသူရဲ့ ပေါင်ခြံနားကနာနေတယ်လို့ ပြောတာတစ်ပတ်လောက်တော့ကြာပြီလို့ ပြောတယ်။ဆရာဝန်တွေစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့လူငယ်လေးရဲ့ ညာဘက်မျက်လုံးအပေါ်ဖက်မှာရောင်ရမ်းနေပြီး သူ့ရဲ့ ညာဘက်ဝှေးစေ့ကနာကျင်မှုရှိတယ်” လို့ တာဝန်ခံဆရာဝန်က ပြောပါတယ်။
ဒါနဲ့လူငယ်ကိုချက်ချင်းပဲMRI ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးနှောက်ဗဟို(Brainstem)၊ဦးနှောက်ကြီးအခြမ်း( cerebrum)နဲ့ဦးနှောက်တစ်လျှောက်မှာထိခိုက်မှုတွေအများကြီး တွေ့ရတယ်၊မျက်လုံးအပေါ်ဖက်နဲ့ညာဝှေးစေ့တွေမှာအရည်အိတ်တွေ တွေ့ရတယ်။ဒီရောဂါကိုတော့ cysticercosisလို့ခေါ်ပြီး taenia solium လို့ခေါ်တဲ့ ဝက်တုတ်ပြားကောင်ရဲ့ ဥကိုစားသုံးမိတာကြောင့်ဒီသားလောင်းတွေဟာဦးနှောက်၊ ကြွက်သားနဲ့အခြားတစ်ရှူးတွေကို ပြန်နှံ့ ကူးစက်ပြီးတက်ခြင်း(seizure)ကို ဖြစ်စေတယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်အတွင်းသံကောင်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့လူငယ်လေးကိုဆရာဝန်များဟာ ပိုးသတ်ဆေး(antiparasitic) ပေးလိုက်ရင် ဦးနှောက် ရောင်ရမ်းမှုတွေပိုဆိုးလာပြီးမျက်စိကွယ် သွားမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ပိုးသတ်ဆေးမပေးခဲ့ကြပါဘူး။သူကိုအတက်ကျစေရန်အတက်ကျဆေး(anti-seizure)နဲ့steroidများသာ ပေးခဲ့ပါတယ်။သို့သော်လည်းဒီလူငယ်လေးဟာ နောက် ၂ ပတ်အကြာမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
(၁) Cysticercosis ဆိုတာဘာလဲ။
ကပ်ပါးကောင်ကူးစက်မှု ရောဂါတစ်မျိုး (parasitic infestation) ဖြစ်ပြီးဝက်တုပ်ပြားကောင်ရဲ့ ဥ(egg of Taenia solium) ကိုစားသုံးမှုကြောင့်ဒီဥတွေဟာဗဟိုအာရုံကြောစနစ်၊ကြွက်သား၊မျက်လုံးနဲ့အရေပြားတွေမှာ အိတ်ငယ်လေးတွေအဖြစ်ကူးစက်ပြန့်နှံတာပါ။ အများစုမှာတော့လုံးဝလက္ခဏာပြလေ့မရှိပါဘူး။
ပြဿနာရဲ့အခြေခံကတော့ဝက်ရဲ့အူထဲမှာရှိတဲ့ ဝက်တုပ်ပြားကောင်(tapeworm)ဟာယင်းဝက်ရဲ့အူထဲမှာပွားများရုံသာမကဝက်ရဲ့အသားစိုင်တွေထဲမှာပါကူးစက်ကာနစ်မြုပ်နေပါတယ်။ ဒီလိုကူးစက်ခံထားရတဲ့ဝက်ရဲ့အသားကိုမကျက်တကျက်ဖြစ်စေ၊အစိမ်းဖြစ်စေစားသုံးတဲ့ လူတွေကိုကူးစက်ပြီးလူတွေရဲ့အူထဲမှာစတင်ပွားများတာပါ။
ဒီလိုပွားနေရင်းနဲ့အူနံရံကိုထိုးဖောက်ပြီး သွေးစီးကြောင်းထဲရောက်ကာဦးနှောက်၊ ကြွက်သား၊မျက်လုံးတွေမှာသွားပြီးဒုက္ခပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတုပ်ပြားကောင်တွေနဲ့ ဥတွေဟာကူးစက်ခံထားရတဲ့သူတွေရဲ့ မစင်ထဲမှာ များစွာပါဝင်နိုင်ပြီးယင်းမစင်ကနေတစ်ဆင့် အခြားသူများကိုပါ ပြန့်ပွားနိုင်ပါတယ်။
(၂) Cysticercosis ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
ရောဂါလက္ခဏာကတော့cysticerciလို့ခေါ်တဲ့ သန်ကောင်ဥများရဲ့တည်နေရာနဲ့အရေအတွက် ပေါ်မှာမူတည်နေပြီးအများစုကတော့ ရောဂါလက္ခဏာမပြတတ်ကြပါဘူး။ဦးနှောက်ထဲကိုသန်ကောင်ဥများကူးစက်ပြန့်နှံ့မှသာလက္ခဏာပြတတ်ပါတယ်။ဗိုက်နာခြင်း၊ပျို့အန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊တက်ခြင်း၊အမြင်အာရုံများ ဝေဝါးခြင်း၊ဟန်ချက်မညီတော့ခြင်း၊ ကြွက်သားများအားနည်းခြင်း၊ထုံကျဉ်ခြင်းစတာတွေကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ရောဂါမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ။
(၁)မကျက်တကျက်ချက်ထားသောဝက်သားများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။စားလျှင်လဲ သေချာစွာ ကျက်အောင်ချက်ပြီးမှစားပါ။
(၂) မစင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါဖြစ်တာကြောင့်လက်ကိုသေချာစွာဆေးကြောခြင်း၊တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုရှိခြင်း၊ အစားအစာများကိုသန့်ရှင်းစွာပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကအထိရောက်ဆုံးကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။(၃)ယင်လုံအိမ်သာများ၊သန့်ရှင်းသော မစင်စွန့်နည်းဖြင့်သာမစင်စွန့်သင့်ပါတယ်။(၄) ၆ လတစ်ကြိမ်သန်ပုံမှန်ချ ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
credit-i am your doctor
အိန်ဒိယနိုငျငံမှာအသကျ ၁၈ နှဈအရှယျလူငယျလေးတဈဦးဟာဝကျတုပျပွားကောငျ (tapeworm) ရဲ့ ဥကိုစားသုံးမိတာကွောငျ့ ယငျးသံကောငျဥကဦးနှောကျကိုကူးစကျပွီး သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။သတငျးအကဉျြးကို ပွောရမယျဆိုရငျတာဝနျခံဆရာဝနျရဲ့ ဖွကွေားခကျြအရ“ဒီလူငယျလေးရဲ့မိဘတှဟော ဆေးရုံရဲ့ အရေးပျေါဆေးကုသခနျး(emergency resuscitation centre)ထဲကို ရေးကွီးသုတျပွာနဲ့ ပွေးဝငျလာကွပါတယျ။
လူငယျကိုကွညျ့လိုကျတော့တဈကိုယျလုံးတကျနတေယျ( tonic clonic seizure၊ history ကိုမေးကွညျ့တောလူငယျလေးကသူရဲ့ ပေါငျခွံနားကနာနတေယျလို့ ပွောတာတဈပတျလောကျတော့ကွာပွီလို့ ပွောတယျ။ဆရာဝနျတှစေမျးသပျကွညျ့လိုကျတော့လူငယျလေးရဲ့ ညာဘကျမကျြလုံးအပျေါဖကျမှာရောငျရမျးနပွေီး သူ့ရဲ့ ညာဘကျဝှေးစကေ့နာကငျြမှုရှိတယျ” လို့ တာဝနျခံဆရာဝနျက ပွောပါတယျ။
ဒါနဲ့လူငယျကိုခကျြခငျြးပဲMRI ရိုကျလိုကျတဲ့အခါမှာဦးနှောကျဗဟို(Brainstem)၊ဦးနှောကျကွီးအခွမျး( cerebrum)နဲ့ဦးနှောကျတဈလြှောကျမှာထိခိုကျမှုတှအေမြားကွီး တှရေ့တယျ၊မကျြလုံးအပျေါဖကျနဲ့ညာဝှေးစတှေ့မှောအရညျအိတျတှေ တှရေ့တယျ။ဒီရောဂါကိုတော့ cysticercosisလို့ချေါပွီး taenia solium လို့ချေါတဲ့ ဝကျတုတျပွားကောငျရဲ့ ဥကိုစားသုံးမိတာကွောငျ့ဒီသားလောငျးတှဟောဦးနှောကျ၊ ကွှကျသားနဲ့အခွားတဈရှူးတှကေို ပွနျနှံ့ ကူးစကျပွီးတကျခွငျး(seizure)ကို ဖွဈစတေယျလို့ သုံးသပျပါတယျ။
ဦးနှောကျအတှငျးသံကောငျကူးစကျရောဂါဖွဈပှားတဲ့လူငယျလေးကိုဆရာဝနျမြားဟာ ပိုးသတျဆေး(antiparasitic) ပေးလိုကျရငျ ဦးနှောကျ ရောငျရမျးမှုတှပေိုဆိုးလာပွီးမကျြစိကှယျ သှားမှာစိုးရိမျတဲ့အတှကျပိုးသတျဆေးမပေးခဲ့ကွပါဘူး။သူကိုအတကျကစြရေနျအတကျကဆြေး(anti-seizure)နဲ့steroidမြားသာ ပေးခဲ့ပါတယျ။သို့သျောလညျးဒီလူငယျလေးဟာ နောကျ ၂ ပတျအကွာမှာကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
ကပျပါးကောငျကူးစကျမှု ရောဂါတဈမြိုး (parasitic infestation) ဖွဈပွီးဝကျတုပျပွားကောငျရဲ့ ဥ(egg of Taenia solium) ကိုစားသုံးမှုကွောငျ့ဒီဥတှဟောဗဟိုအာရုံကွောစနဈ၊ကွှကျသား၊မကျြလုံးနဲ့အရပွေားတှမှော အိတျငယျလေးတှအေဖွဈကူးစကျပွနျ့နှံတာပါ။ အမြားစုမှာတော့လုံးဝလက်ခဏာပွလမေ့ရှိပါဘူး။
ပွဿနာရဲ့အခွခေံကတော့ဝကျရဲ့အူထဲမှာရှိတဲ့ ဝကျတုပျပွားကောငျ(tapeworm)ဟာယငျးဝကျရဲ့အူထဲမှာပှားမြားရုံသာမကဝကျရဲ့အသားစိုငျတှထေဲမှာပါကူးစကျကာနဈမွုပျနပေါတယျ။ ဒီလိုကူးစကျခံထားရတဲ့ဝကျရဲ့အသားကိုမကကျြတကကျြဖွဈစေ၊အစိမျးဖွဈစစေားသုံးတဲ့ လူတှကေိုကူးစကျပွီးလူတှရေဲ့အူထဲမှာစတငျပှားမြားတာပါ။
ဒီလိုပှားနရေငျးနဲ့အူနံရံကိုထိုးဖောကျပွီး သှေးစီးကွောငျးထဲရောကျကာဦးနှောကျ၊ ကွှကျသား၊မကျြလုံးတှမှောသှားပွီးဒုက်ခပေးတာ ဖွဈပါတယျ။ဒီတုပျပွားကောငျတှနေဲ့ ဥတှဟောကူးစကျခံထားရတဲ့သူတှရေဲ့ မစငျထဲမှာ မြားစှာပါဝငျနိုငျပွီးယငျးမစငျကနတေဈဆငျ့ အခွားသူမြားကိုပါ ပွနျ့ပှားနိုငျပါတယျ။
(၂) Cysticercosis ရဲ့ရောဂါလက်ခဏာတှကေ ဘာတှလေဲ။
ရောဂါလက်ခဏာကတော့cysticerciလို့ချေါတဲ့ သနျကောငျဥမြားရဲ့တညျနရောနဲ့အရအေတှကျ ပျေါမှာမူတညျနပွေီးအမြားစုကတော့ ရောဂါလက်ခဏာမပွတတျကွပါဘူး။ဦးနှောကျထဲကိုသနျကောငျဥမြားကူးစကျပွနျ့နှံ့မှသာလက်ခဏာပွတတျပါတယျ။ဗိုကျနာခွငျး၊ပြို့အနျခွငျး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊တကျခွငျး၊အမွငျအာရုံမြား ဝဝေါးခွငျး၊ဟနျခကျြမညီတော့ခွငျး၊ ကွှကျသားမြားအားနညျးခွငျး၊ထုံကဉျြခွငျးစတာတှကေို ခံစားရမှာဖွဈပါတယျ။
(၃) ရောဂါမဖွဈအောငျ ဘယျလိုကာကှယျရမလဲ။
(၁)မကကျြတကကျြခကျြထားသောဝကျသားမြားကို ရှောငျကွဉျပါ။စားလြှငျလဲ သခြောစှာ ကကျြအောငျခကျြပွီးမှစားပါ။
(၂) မစငျမှတဈဆငျ့ကူးစကျတတျသော ရောဂါဖွဈတာကွောငျ့လကျကိုသခြောစှာဆေးကွောခွငျး၊တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးမှုရှိခွငျး၊ အစားအစာမြားကိုသနျ့ရှငျးစှာပွငျဆငျခွငျးတို့ကအထိရောကျဆုံးကာကှယျနိုငျပါလိမျ့မယျ။(၃)ယငျလုံအိမျသာမြား၊သနျ့ရှငျးသော မစငျစှနျ့နညျးဖွငျ့သာမစငျစှနျ့သငျ့ပါတယျ။(၄) ၆ လတဈကွိမျသနျပုံမှနျခြ ရနျလိုအပျပါတယျ။
မျက်နှာကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာမယ့်သူဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်သိနိုင်မယ့် နည်းလမ်း…!
သက္ကမိုးညိုမှသိန်း ၁၀၀ ဖြင့်အာမခံရခဲ့…!
This Month : 24472
This Year : 164792
Total Users : 190677
Total views : 576402